XFCE: Ahoana ny fomba hanamboarana ny tontolo iainana Linux Mouse Desktop? | Avy amin'ny Linux
XFCE: Ahoana ny fomba hanamboarana ny tontolo iainana Desktop Linux Mouse?
Linux PostInstall | | Fisehoana / personalization, Tutorials / Manuals / Tips
Iray amin'ireo lohahevitra na faritra, izay mahaliana matetika ny ankamaroan'ny mpampiasa azy GNU / Linux eran'izao tontolo izao, mazàna ny fahafahan'ireto farany mamela ny tenany ho voatokana ho azy manokana, ary mamela azy ireo hisehoseho amin'ny azy fahaizana manokana alohan'ny hafa, amin'ny fifaninanana mahasalama sy tsara.
Mazava ho azy fa GNU / Linux Distro, tsirairay Tontolo iainana Desktop (DE), tsirairay Window Manager (WM) mazàna dia samy manana ny fahaizany manokana. Noho izany, amin'ity boky ity dia hifantoka amin'ny XFCE, izay teny an-dalana, no Desktop Environment (DE) tiako indrindra nandritra ny taona maro izao, izay ampiasako izao ao amin'ny Distro MX Linux 19.3.
Na izany aza, ho an'ireo izay mbola tsy nampiasa na tsy mahalala firy momba izany XFCEIlaina ny mamporisika ny famakiana ny zavatra navoakantsika teo aloha momba azy io, izay ambaranay fa:
"XFCE dia tontolo birao maivana ho an'ny rafitra toa an'i UNIX. Ny tanjony dia ny ho mailaka haingana ary hampiasa loharanom-pahalalana vitsivitsy, ary mijanona ho mahasarika amin'ny maso ary mora ampiasaina. XFCE dia maneho ny filozofia nentim-paharazana UNIX momba ny fahamaotinana sy ny fahaiza-mampiasa azy indray. Izy io dia misy andiana fampiharana izay manome ny fiasa rehetra azonao antenaina amin'ny tontolon'ny birao maoderina. Voafetaka misaraka izy ireo ary azo fidiana amin'ireo fonosana misy mba hamoronana tontolo iainana tsara indrindra ho an'ny asa". XFCE Community (www.xfce.org).
Ary ho an'ireo liana amin'ny fikarohana lalina Fanaingoana GNU / Linux DistrosAmin'ny ankapobeny, avelanay ho anao ireto olon-kafa ireto:
Compton, mpamoron-kira maivana tsy maintsy andramanao
XFCE: Ny fanaovako manokana an'ny XFCE amin'ny MX Linux
1 XFCE: ny tontolo iainana Desktop Linux Mouse
1.1 Ahoana ny fomba hanamboarana XFCE?
1.1.3 Fikirana amin'ny Window Manager
1.1.4 Tontonana lehibe Desktop
1.1.5 Button sy Menu ao an-trano
1.1.6 Singa ivelany hafa (Conky)
XFCE: ny tontolo iainana Desktop Linux Mouse
Ahoana ny fomba hanamboarana XFCE?
Hanombohana amin'ny fanaingoana ny Tontolo iainana Desktop XFCE hizara azy ho singa maromaro isika, avelantsika ny Desktop Background (Wallpaper), satria mazava ho azy fa efa 100% amin'ny tsiron'ny mpampiasa izany.
Hanombohana ny XFCE fanaingoana, ny idealy dia tokony hanomboka amin'ny fisehoan'ny DE amin'ny ankapobeny, izay azo atomboka amin'ny alàlan'ny safidy "Fisehoana" do "Manager manager" nataon'i XFCE. Mba hanaovana izany, ny mpampiasa dia tokony hikorisa amin'ny takelaka tsirairay (Style, kisary, endritsoratra ary fanovana) ary manandrama fanaraha-maso samihafa. Ny ahy dia azo jerena amin'ny sary eo ambony.
Avy eo ianao dia afaka mandeha amin'ny safidy "Birao" do "Manager manager" nataon'i XFCE. Mba hanaovana izany, ny mpampiasa dia tokony hikorisa amin'ny takelaka tsirairay (Background, Menus and Icons) ary manandrama fanaraha-maso samihafa. Ny ahy dia azo jerena amin'ny sary eo ambony.
Avy eo mandehana amin'ny safidy "Fikirakirana mpitantana varavarankely" do "Manager manager" nataon'i XFCE. Mba hanaovana izany, ny mpampiasa dia tokony hikorisa amin'ny takelaka tsirairay (Fisafidianana, fifantohana, fahazoana miditra, faritra iasana, fametrahana toerana ary mpamorona) ary manandrama fanaraha-maso samihafa. Ny ahy dia azo jerena amin'ny sary eo ambony.
Tontonana lehibe Desktop
Avy any ianao dia afaka mandeha amin'ny safidy "Panel" do "Manager manager" nataon'i XFCE. Mba hanaovana izany, ny mpampiasa dia tokony hikorisa amin'ny takelaka tsirairay (Fisehoana fampisehoana sy singa) ary manandrama fanaraha-maso samihafa. Ny ahy dia azo jerena amin'ny sary eo ambony.
Button sy Menu ao an-trano
Amin'ny tranga manokana, araka ny ahitanao ny fampiasako ny singa (widget) antsoina hoe «Wishker Menu» fanoloana ny "Menu nentim-paharazana XFCE". Izay mamela ahy handrindra azy araka ny hita, amin'ny sary eo ambony eo ihany.
Singa ivelany hafa (Conky)
Compton: Mba hahatratrarana, ankoatry ny vokatra ara-pahitana maro hafa, ny mangarahara manerantany izay misy mangarahara ho an'ireo fikandrana miasa, ary ny mangarahara ho an'ny varavarankely menu lehibe.
Conky's: Mba hahatratrarana ny fampisehoana fampahafantarana tsara sy miasa amin'ny birao.
Mazava ho azy fa mbola betsaka ny azo atao ampanjifaina XFCENa izany aza, amin'ity fotoana ity dia afaka miala mora foana ny olona iray fisehoan'ny maso eo amin'ny biraonao banga, toy ilay aseho amin'ny sary eo ambony eo akaiky, amin'ny iray hafa tsy mitovy tanteraka aminy, toa ilay natoroko anao etsy ambony.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «¿Cómo personalizar el Entorno de Escritorio XFCE?», izay amin'ny toerana misy anao, dia tonga maivana sy minimalist, ary noho izany, tsy dia manintona loatra amin'ny fomba fijery maso; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » XFCE: Ahoana ny fomba hanamboarana ny tontolo iainana Desktop Linux Mouse?
GitHub dia nanakana ny youtube-dl ary nanao dingana hisorohana ny fianjerana tsy mitombina